Ahoxisiwe amacala abebhekene noShabalala | News24
Ahoxisiwe amacala abebhekene noShabalala
PHOTO: nokuthula khanyile UMnuz Bonginkosi Shabalala nommeli wakhe uPhumlani Fakude.
AGIYE ngaphandle kwenkantolo kamantshi eMgungundlovu ngoMsombuluko amalunga omndeni wakwaShabalala emuva kokuhoxiswa kwamacala okubulala abebhekene noBonginkosi Shabalala (40) waseMaqeleni.
UShabalala obesolwa ngokubulala abesifazane ababili ababengamalunga e-ANC mhlaka 8 kuJuni nonyaka ubevele kafushane enkantolo njengoba bekulindeleke ukuba kuphume isinqumo mayelana nokuthi icala lakhe lizodluliselwa kuyiphi inkantolo lapho liyobe seliqala khona ukuqulwa.
Kwenzeke obekungalindelekile ngesikhathi umbuso ukhipha isinqumo sokuthi uyawahoxisha amacala abebhekene nomsolwa ngenxa yokushoda kobufakazi.
UShabalala waboshwa emuva kokudutshulwa kubulawe ngesihluku uBadedile Ntshapa (54) noPhetheni Ngubane (60).
UNtshapa noNgubane badutshulwa ngentululwane yezinhlavu bevela emhlanganweni wegatsha le-ANC ku-ward 15 eMehlokazulu High School.
Kuthiwa laba ngesikhathi sebehamba bebuyela emakhaya, bavinjezelwa abasolwa abavele bavulela ngenhlamvu bebhekise kubona, UNkk Ntshapa washonela endaweni yesigameko kwase kuthi uNkk Ngubane yena washonela esibhedlela ngosuku olulandelayo.
Eqala ukuvela enkantolo uShabalala kwakulindeleke ukuba avele nabanye abasolwa ababili kodwa kwabuye kwathiwa amacala abo ahoxisiwe ngoba ubufakazi obubaxhumanisa nalelicala bungekho.Umshushisi uNkk Patti David watshela inkantolo ukuthi umsolwa waboshwa ngoba omunye wabashona akwazi ukuthi amgagule ngaphambi kokuba adlule emhlabeni.
Indodana kaNgubane uLindokuhle uthe bebengayile enkantolo kodwa bezwile ngesinqumo.
“Engingakusho nje ukuthi asineme ngesinqumo senkantolo, sithukile ngoba icala belingakaqulwa nokuqulwa njengoba selizophelela emoyeni. Okusixakayo ukuthi yini ebiyenza liloku lihlehla uma vele ubufakazi bebengekho kwasekuqaleni.”
Uthe okubaphatha kabi ukuthi nomphenyi wecala ubengaxhumani nabo njengomndeni abazise ukuthi luhamba kanjani uphenyo.
“Selokhu samgcina ngosuku lwesigameko umphenyi wecala, akakaze azihluphe ngokuthi axhumane nathi asazise ukuthi kuqhubekani. Ithina ekufanele simlandele.”
Enye indodana kaNgubane uSbu Ngubane uthe isinqumo senkantolo sibeka ngokusobala ukuthi abantu besifazane bangabulawa noma ikanjani.
“Lesinqumo sikhombisa ukungayikhathaleli impilo yomuntu wesifazane. Kukhipha isithombe sokuthi abantu noma bangabulala ngeke bashushiswe. Siphathe kabuhlungu kodwa akusenani angeke siphikisane nesinqumo senkantolo. Thina angeke sikwazi nokuqhubeka nezimpilo zethu siphole ngokubulawa kukamama singakamazi umbulali futhi engakabhekani nengalo yomthetho.”
Umndeni wakwaNtshapa uthe ucela ukungaphawuli mayelana nesinqumo senkantolo.